Madaxweyne Xasan oo la kulmay guddiga sare ee Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed “DAAWO VIDEO” |
Madaxweyne Xasan oo la kulmay guddiga sare ee Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed “DAAWO VIDEO”
buy sildenafil, acquire lioresal. Sawir hore oo ah Guddiga sare ee Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed
Sawir hore oo ah Guddiga sare ee Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta kulan Muqdisho kula yeeshay guddiga sare ee Jaamcadda Ummadda Soomaaliyeed, kaasi oo looga hadlay dhowr arrimood oo ay ka midtahay xoojinta iyo sare u qaadidda tacliinta sare ee dalka, gaar ahaan tan Jaamacadda Ummaadda.
Kulanka oo uu shir guddoominayay Madaxweynaha dalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayna ka qeyb galeen mas’uuliyiin ka socotay Wasaaradaha Tacliinta sare iyo waxbarashada, waxaana diiradda lagu saaray tayeynta kuliyada ay Jaamacaddu bixin doonto, maadaama 16-ka August-2014 uu rasmi ah xarriga uga jaray Madaxweynaha Soomaaliya.
Wasiir ku-xigeenka Hidaha iyo Tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Axmed Kulane oo markii uu kulanka soo idlaaday kaddib lahadlay Warbaahinta ayaa sheegay in waxyaabah kulanka looga hadlay ay ka midtahay in Jaamacaddu ay tahay mid lacag la’aan ah oo aan jirin lacago ardayda laga qaadayo.
“In Jaamacaddu ay noqoto mid aqoonteeda sareyso oo macalimiinteeda ay noqdaan kuwa leh aqoon sare, in Jaamacaddu ay noqoto Jaamacad u qalanta midda ummadda oo heer qaran ah, in ardayda ka soo baxdana ay noqdaan kuwa taayo leh oo wax ka qabta dhibta dalka ka taagan, in guddiga ardayda Jaamacadda ka qaadaya Imtixaanka ay noqdaan kuwa si cadaalad ah u qaada oo aysan sameynin wax eex ah” ayuu yiri Wasiir ku-xigeenka hidaha iyo Tacliinta sare.
Wasiir ku-xigeenku waxa uu intaa ku daray in sidoo kale uu kulanka ka soo baxay in guddiga sare ee Jaamacaddu ay bil waliba yeeshaan kulan gaar ah oo looga hadlayo waxyaabaha qabsoomay iyo caqabadaha hortaagan, si wax looga qabto.
Jaamcadda Ummadda Soomaaliyeedd oo dhawaan dib u dhis lagu sameeyey isla markaana uu xarigga ka jaray Madaxweynaha dalka ayaa wax weyn ku soo kordhin karta horumarka tacliinta sare ee dalka.